Dare repamusoro muBulawayo rakarasa nemusi weChina chikumburo chechimbi-chimbi chekuti hurumende imise hurongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi.
Mutongi wedare iri, Justice Martin Makonese, vakarasa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi icho chaive chaitwa naVaCharles Thomas pamwe chete nesangano reIbhetshu Likazulu vakatiwo vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi, mumutongo wavakapa neChina.
VaThomas, avo vanoti vakatochwa panguva yeGukurahundi, vaive vadoma mutumgamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, gurukota rezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, neNational Peace and Reconciliation Commission, NPRC, pamwe nasachigaro, VaSelo Nare, sevanhu vane chekuita nenyaya iyi.
Vaiti hurumende haifanirwe kutungamira mukuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yeGukurahundi nekuti vamwe vakuru vakuru vehurumende vane chekuita nenyaya iyi.
Vaitiwo kutungamira kwehurumende mukuvigwa patsva kwevanhu vakauraiwa paGukurahundi kwaizokanganisa humbowo hwekubudisa pachena kuti vanhu ava vakauraiwa sei.
Mumutongo wavo, Justice Makonese vakati nyaya yeGukurahundi nyaya inobaya moyo yevakawanda munyika saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika.
Vakati VaThomas nevamwe vavo vaive vamhanyira kukwira kudare vasina kumboedza kugadzirisa nhunha dzavo neNPRC iyo yakatarwa nemutemo kuti rigadzirise nyaya dzakadai.
Justice Makonese vakati vanhu havafanirwe kungokwira kudare pasina zvikonzero zavakasimba.
Rimwe remagweta ainge akamirira NPRC, VaMaclean Mahaso, vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Munyori wesangano reIbhetshu Likazulu, VaMbuso Fuzwayo,vati vange vasati vaona mutongo uyu asi vati vanogutsikana kuti dare rakabudisa pachena kuti NPRC ndiyo inofanirwa kutungamira panyaya yekuvigwa patsva kwevanhu vakauraiwa panguva yeGukurahundi kwete hurumende.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, uye vari gweta, VaMusa Kika, vati nyaya yeGukurahundi inyaya yakakosha zvikuruinofanirwa kugadziriswa nenzira inofadza hama dzevakaurayiwa navose vakabatwa nenyaya iyi.
Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva iyi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu eMatabeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi Fifth Brigade.
Vamwe vanoti hurumende inifanirwa kukumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwdi.
Asi hurumende haisati yakumbira ruregerero kusvika pari zvino.